Ngwa 7 kachasị mma na-agbanwe agba ntutu na oge 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ngwa 7 kachasị mma na-agbanwe agba ntutu na oge
Ngwa na-agbanwe agba ntutu nwere ike ịba uru ma maka ikpori ndụ na ịghọgbu ndị enyi gị yana maka inyere gị aka ikpebi ihe ndo ga-agba. Ngwa ndị a na-enye gị ohere ịnwale anya ọhụrụ tupu ị gaa na salonlọ Mmanya ahụ, na-abụkarị n'ezie. Ya mere, enwere obere ihe ịkwa ụta mgbe e mesịrị.
1. Agba ntutu
Agba ntutu na-enye ụdị agba agba dị iche iche, dịka nke atọ, gbara ọchịchịrị, etolitela ma ọ bụ niile ntutu. Mgbe ịmepe ngwa ahụ, onye ọrụ ahụ na-eche ihu oyiyi ahụ site na igwefoto, mana enwere ike iji foto site na ekwentị. Naanị họrọ agba na ala nke ihuenyo ahụ.
Enwere nhọrọ obi ike, dị ka ụdị dị iche iche nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo odo, acha anụnụ anụnụ na ndị a na-ahụkarị, dị ka acha odo odo, aja aja na ọbara ọbara. Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịkewaa ihuenyo iji tụnyere ihe oyiyi na oge. Agbanyeghị na enweghi nghọta, metụ ihuenyo ka ị see foto ma ọ bụ metụ ma jide ka ịdekọ vidiyo.
Agba ntutu (n'efu, na ịzụrụ ihe ntanetị): A gam akporo | iOS
2. Fabby Lee
Chọpụta otu ị ga - esi jiri ntutu ntutu ọhụrụ mee ezigbo oge
Fabby Look bu ihe omuma Google nke emere ka obula gbanwee agba ntutu. Ngwa nke ụda na-eme n'oge. Naanị metụ igodo ahụ ma lee oge mgbanwe. Enwere nhọrọ ndị mara mma, dị ka acha odo odo, ọbara ọbara, aja aja na isi awọ, ọbụlagodi ndị na-adịkarịghị, dị ka acha anụnụ anụnụ, pink, oroma, wdg.
Ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ na-amasị gị, ịnwere ike ịse foto, na mkpuchi na etiti ihuenyo ahụ, ma kesaa ya na Facebook, Instagram, Snapchat na ndị ọzọ. Usoro ihe omume a enweghi ihe mgbagwoju anya, ma o nweghi nhazi ma obu idezi ihe.
Fabby anya (n'efu): Android | iOS
Instagram abụghị ngwa a kapịrị ọnụ iji gbanwee agba ntutu, mana ọ nwere ọtụtụ nzacha nke na-enye gị ohere itinye ihe mkpuchi ọhụrụ n'oge. Iji mee nke a, gaa na Akụkọ, pịgharịa site na mkpịsị aka nri site n'aka nri gaa n'aka ekpe, ruo na njedebe. Mgbe ahụ ị ga-ahụ nhọrọ ahụ Nchọpụta Ọchụchọ, na ị kwesịrị imetụ aka.
Na ihuenyo ahụ gosipụtara, gaa na akara ngosi iko, nke dị n'elu ihuenyo ahụ n'aka nri. Na ọchụchọ, tinye okwu dị ka yi ntutu o agba ntutu ma ị ga - ahụ ọtụtụ nhọrọ nzacha nke na - enye ọrụ.
Kpọọ dee na-amasị gị ma mgbe ahụ Na-enweta. A ga-eduru gị na ihuenyo mbipụta Akụkọ, ebe ị nwere ike ịse foto ma dekọọ vidiyo, dịka ị na-eji nzacha ọ bụla.
Ihe Nduzi Ihe nzacha ezoro ezo na mmetụta ya na Akụkọ gbasara Instagram - Hụ otu esi achọta na-akọwa nkuzi n'ụzọ zuru ezu.
Instagram (n'efu): Android | iOS
4. Uwe isi
K-POP edozi edozi
A na-akpali ntutu isi site na ntutu nke ndị na-ese ihe K-Pop music genre si South Korea. Ngwa ahụ na-enye gị ohere gbagoo foto site na Osisi Osisi ma ọ bụ were ya na ebe. Onye ọrụ ga-ebu ụzọ họrọ ịkpụ ntutu wee ga n'ihu dyeji ịgbanwe ọkwa.
Enwere ọtụtụ nhọrọ agba dị iche iche, gụnyere nke ndị dị ka lilac, pink, purple, green. Ma edozi isi na agba nwere ike gbanwee ka ọ dị ka okike dị ka o kwere mee.
Ekike (n'efu): gam akporo
5. YouCam Etemeete
N'agbanyeghị na-elekwasị anya na etemeete mmetụta, YouCam Etemeete nwere elu atụmatụ ịgbanwe ntutu agba na ozugbo. Onye ọrụ nwere ike ịnwale ụdị agba abụọ, dakọtara na ndò ha, ma ọ bụ tinye otu ndò.
Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ike, nchapụta, yana mkpuchi agba ma ọ bụ ole ka agwakọta ya na ụda mbụ ya. Ọ bụrụ na nsonaazụ gị na-amasị gị, ngwa ahụ na-enye gị ohere ọ bụghị naanị ịse foto, kamakwa ịdekọ vidiyo na nza.
Etemeete YouCam (n'efu, na ịzụrụ ihe ntanetị): A gam akporo | iOS
6. Agba ntutu
Agba Agba ntutu na-enye gị ohere ịse foto n ’ebe ahụ ma ọ bụ jiri nke dị n’Ọbá akwụkwọ ahụ. Mgbe ahụ, onye ọrụ ga-ahọrọ, na onyonyo ahụ, mpaghara nke ntutu wee metụ ụda ọ chọrọ itinye. Nwere ike ịhọrọ otu agba agba ihe niile ma gbakwunye ndị ọzọ na obere eriri.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịmepụta agba nke gị site na iji nhọrọ Tinye agba. Enwere ike ịchekwa nsonaazụ na ekwentị ma ọ bụ kesaa na ngwa ndị ọzọ.
Ntutu ntutu (n'efu, na ịzụrụ ihe n'ime ngwa): iOS
7. Agbanwe agba agba
Onye na-agbanwe agba na ntutu nwere amụma yiri nnọọ Agba Agba Agba maka gam akporo. Ngwa ahụ na-enye gị ohere iji foto sitere na Osisi Osisi ma ọ bụ were ha na ebe. Mgbe ahụ kpatụ aka na agba achọrọ ma tinye ya na mpaghara ntutu site na iji mkpịsị aka gị. Ọ ga-ekwe omume itinye ọtụtụ ụda n'otu foto ahụ na ọbụlagodi ihe ndị ọzọ nke foto ahụ.
Ọzọkwa, onye ọrụ nwere ike ịgbanwe agba nke agba, na-eme ka mmetụta ahụ bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Ngwa ahụ na-enye nhọrọ ịkekọrịta nsonaazụ na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ chekwaa ya na ngwaọrụ ahụ. Enwere ike ịgwa gị ka ị nye ya kpakpando ise. Ikwesighi ime nke a iji nweta ihe enyemaka.
Mgbanwe agba agba (n'efu): gam akporo
SeoGranada na-atụ aro:
Cutkpụ ntutu kacha mma na simulators agba iji gbanwee ọdịdị ahụ
Ngwa ahụ gbanwere okike gị ma mee ka ị bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị; hụ otu esi eji
Ngwa ndị ga-enyere aka na etemeete
Esi mara ma ọ bụrụ na iPhone bụ nke mbụ ma ọ bụ nke adịgboroja ma ghara ịghọgbu ya
Ihe omume igwefoto weebụ 8 kasị mma maka Windows, macOS, na Linux
Etu esi amata ma ọ bụrụ egwuregwu na-agba ọsọ na PC m
Etu esi enweta mmiri site na ekwentị na PC
8 mmemme kachasị mma ka ị swipe na PC
Ngwa 6 ihu igwe ka ihu igwe ghara ijide gị
Mmemme 8 iji mepụta egwuregwu na PC ọbụlagodi amaghị etu esi eme mmemme
10 kacha mma foto ndị na-ekiri iji dochie Windows ngwa
Eziokwu ma ọ bụ akụkọ adịgboroja: otu esi ekwu ma ọ bụrụ na akụkọ bụ ụgha ma ọ bụ eziokwu
Etu esi ezipu Foto na vidiyo na Akụkọ Instagram na PC na 2020
A naghị edozi ahụigodo - otu esi edozi ma dozie nsogbu ahụ